Zipo sy kiraro avo, tandem tonga lafatra amin'ny ririnina | Bezzia
Maria vazquez | 10/01/2022 18:00 | Inona no hotafiko
Roa taona lasa izay tany Bezzia dia efa nanolo-kevitra ity tandem ity izahay izay miasa tsara amin'ny ririnina. Avy eo ny fitambaran'ny zipo sy kiraro avo Iray amin'ireo fironana lehibe tamin'ny vanim-potoana io ary na dia tsy afaka mamaritra azy io ho toy izany aza isika amin'ity taona ity, dia mbola safidy tsara izany.
Ny kiraro avo dia miasa tsara indrindra amin'ity taona ity misy karazana zipo roa: Ny zipo fohy sy avo lenta ary zipo lava dia afaka manangana ireo fanapahana sy boky samihafa ireo, araka ny hitanao amin'ny sary nofidianay hanentanana anao.
1 Miaraka amin'ny zipo fohy
2 zipo lava
Miaraka amin'ny zipo fohy
Ny zipo mini na zipo fohy dia lasa safidy voalohany hanaovana ity tandem malaza ity amin'ity ririnina ity. Afaka miloka ianao zipo voamarina misy zana-tsipìka eo anoloana nentanin’ny taona fitopolo. Fa koa ho an'ny hafa mahonon-tena kokoa amin'ny loko tsy miandany.
Atambatra amin'ny a poloneck amin'ny feo tsy miandany izay tsy mangalatra ny jiro sy ny kiraro avo amin'ny mainty na volontany. Aza adino ny stockings, ny voajanahary kokoa. Ary mba hiadiana amin'ny hatsiaka, miloka amin'ny palitao lava toa an'i Tiffany, izay nahatonga antsika ho tia.
Amin'ny zipo lava dia tsy misy fironana mazava toy izany ary mitombo ny fahafaha-manao. ny zipo nirehitra tamin`ny lamba volon`ondry izy ireo dia misolo tena mahazatra sy kanto foana. Miloka toa an'i Zina amin'ny zipo amin'ny tonony mafana sy akanjo ba ary kiraro mainty raha te hilalao azy io ianao.
ny fitambarana monochrome Ny zipo sy ny akanjo ba nataony dia safidy tsara hafa. Tato anatin'ny taona vitsy lasa andiana ba nataony dia nahazo laza lehibe, indrindra ireo natao hanomezana fampiononana ambony indrindra ho antsika.
Saingy raha miverina amin'ny zipo tandem sy kiraro avo izahay, dia tsy te hifarana raha tsy miresaka momba ny fijery roa samy hafa izay naharesy lahatra anay 100%: ny an'i Ellen, vita amin'ny zipo mainty be dia be ary palitao sy kiraro vita amin'ny volon'ondry. sokafy ho maoderina sy mahonon-tena; ary ny Rocky's, misy zipo mirindra am-pifaliana, akanjo ba vita amin'ny akanjo mitovy loko sy kiraro mifanohitra.
Iza amin'ireo no tianao?
Sary - @tineandreaa, @lai_tiffany, @zinafashionvibe, @adelinerbr, @audreyrivet, @jennymwalton, @ellenclaesson, @ariviere, @rocky_barnes
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » lamaody » Inona no hotafiko » Zipo sy kiraro avo, fitambarana tonga lafatra amin'ny ririnina